Ny tonta ihany no avadibadika… : fanovana governemanta fandrebirebena saim-bahoaka | NewsMada
Ny tonta ihany no avadibadika… : fanovana governemanta fandrebirebena saim-bahoaka
Efa nampoizina? Na tsy mahagaga, raha ny fomba fiasan’ny fitondrana, miainga amin’izao fanovana ny ampahany amin’ny governemanta izao. Hita taratra ny tsy fananana olona, fa tonga eo amin’ny fitondrana vao maka olona etsy sy eroa. Tsy ahitana olom-baovao koa anefa fa ny tonta no navadibadika. Tsy misy azo antenaina fa fandrebirebena saim-bahoaka fotsiny!
Notendrena ho minisitry Rano sy ny Angovo ary ny akoranafo, tamin’ny fanamboarana, governemanta, omaly, ny minisitry ny Fitantanam-bola teo aloha, Rasolohelison Lantoniaina. Vita hatreo izany ny minisitra, hany tokana avy amin’ny Tim eo anivon’ny governemanta, amin’ny alalan-dRavatomanga Roland nisahana izany teo aloha. Tapaka tanteraka izany ny tady amin’ny fitondrana sy Ravalomanana ?
Efa filohan’ny filankevi-pitantanan’ny Sonapar ity minisitry ny Rano vao notendrena ity, ary delege jeneralin’ny Jirama. Hiatrika ny amin’ny fanarenana ny Jirama sa mitondra amin’ny fanalalahana izany ho an’ny vahiny ? Nakambana ho iray ny minisiteran’ny Rano sy ny minisiteran’ny Angovo, tsy nisy minisitra tao anatin’ny fito volana mahery. Hatramin’izao, mbola olana be ny amin’ny famatsian-jiro sy rano. Ohatra ny delestazy any amin’ny faritra, toy ny niseho tao Toamasina ny andron’ny Paka teo. Eo koa ny fiakaran’ny vidin-tsolika tsy misy farany.
Ny teo ihany no naverina…
Ny teo ihany koa no naverina. Notendrena ho minisitry ny Serasera sy ny fifandraisana amin’ny andrimpanjakana Rahajason Harry Laurent. Efa nitana izany andraikitra izany izy tamin’ny fitondrana Tetezamita, ary filoha lefitry ny Mapar, faritany Mahajanga: nametra-pialana, nandao an-dRajoelina ary lasa mpanolotsain-dRajaonarimampianina. Nanangana ireo karazana haino aman-jery samihafa manohana ny fitondrana amin’izao fotoana izao ny tenany. Anisan’ny antony nanalana ny minisitra teo aloha, Andrianjato Vonison, ny tale kabinetra niara-niasa taminy voasazy dimy taona asa an-terivozona noho ny fanodinkodinam-bolam-panjakana.
Hanao ahoana kosa ny ho akon’izao eo amin’ny tontolon’ny fifandraisana sy ny haino aman-jery, mbola misy olana ny amin’ny lalàm-pamoretana manoloana ity minisitry ny Fifandraisana vao notendrena ity ? Ankatoky ny fifidianana rahateo izao…
Nesorina amin’ny toerany ny Jly Paza Didier nisahana ny sekreteram-panjakana misahana ny zandarimaria eo anivon’ny minisiteran’ny Fiarovam-pirenena, ary nosoloina ny Jly Randriamahavalisoa Alfred. Hitondra vahaolana eo amin’ny fihanaky ny fitsaram-bahoaka sy ny ady amin’ny kolikoly ataon’ny eo anivon’ny zandary ?
Manampy ireo ny nanendrena an-dRafatrolaza Bary Emmanuel ho sekreteram-panjakana eo anivon’ny minisiteran’ny Raharaham-bahiny miadidiy ny fiaraha-miasa sy ny fampandrosoana.
Mbola eo amin’ny sezany…
Na izany aza, mbola voatana amin’ny toerany sy sezany ireo minisitra nahabe resaka momba ny ”Raharaha Razaimamonjy Claudine”. Anisan’izany ny minisitry ny Fitsarana, Andriamiseza Charles, ny minisitry ny Fahasalamana, Andriamanarivo Lalatiana… Tahaka izany koa ny tsy nanendrena ny minisitry ny Atitany fa mbola tazonin’ny Praiminisitra Mahafaly Solonandrasana ihany izany… Tetika politika hiatrehana ny fifidianana ?
Araka izany, tsy mamaly ny hetahetan’ny vahoaka izao fanovana amin’ny ampahany izao. Na hiova tanteraka sy horavana mihitsy koa aza, efa tsy misy antenaina amin’io fitondrana io mihitsy intsony, raha miainga amin’ny fitantanana ny firenena tao anatin’ny telo taona. Natao hisarihana ny sain’ny vahoaka sy ho very amin’ny adihevitra fotsiny hanadino ireo tranga niseho tato ho ato io fanovana amin’ny ampahany ny mpikamban’ny governemanta io. Ohatra, mba hadinodino ny ”Raharaha Razaimamonjy Claudine”, ny fiakaran’ny vidim-piainana, ny olan’ny tsy fandriampahalemana sy ny tsy filaminana…
R. Nd sy Randria